Global Voices teny Malagasy » Maraoka: Ny Jodaisma ao Maraoka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Aogositra 2020 15:10 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika (fr) i Boukary Konaté, avylavitra
Sokajy: Israely, Maraoka, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Manana tantara lavabe ifandraisany amin'ny Jodaisma i  Maraoka; nandritra ny fanitarana ny fanjakana romàna, betsaka ireo Jiosy nipetraka tao amin'ity antsoina ankehitrio hoe Maraoka ity. Arakaraky ny nandehanan'ny fotoana, niova avy any amin'ny tsara no lasa nihahenjana ny fifandraisana nisy tamin'ireo mponina izay miozolmana no betsaka tao Maraoka sy ireo Jiosy vitsy an'isa tao aminy. Taorian'ny fananganana ny Fanjakana Israeliàna, nifindra monina ny ankamaroan'ireo Jiosy tao Maraoka (nanodidina ny 15% tamin'ireo Jiosy Israeliàna raha ny marina dia taranaka Jiosy avy ao Maraoka avokoa); na izany aza, manodidina ny 7.000 eo no Jiosy mbola monina ao Maraoka amin'izao fotoana izao. Matetika ry zareo Maraokàna no maika ery manamarika hoe Jiosy i André Azoulay , mpanolotsaina voalohan'ny mpanjaka.
Zara raha misy zavatra hita ety anaty aterineto momba ireo Jiosy Maraokàna , araka ny fanamarihana vao haingana nataon'ilay Maraokàna bilaogera Ibn Kafka. Ao anaty lahatsoratra iray naverina navoaka tamin'ny bilaogy Jewish Morocco, hoy ny nosoratany:
Vetivety dia kivy izay mitady fanampimbaovao ety anaty aterineto momba ny jodaisma maraokàna: eo anelanelan'ny fitobahan'ireo rohy sy ny kalitao misavoritaka be ihany amin'ny torohay, dia matetika tonga eo ny sorisory. Hatreto, ilay tranonkala mamiratr'i Rick Gold – Visiting Jewish Morocco (fitsidihana ireo Jiosy ao Maraoka) – no lasa teboka iray fiaingàna tsy azo ihodivirana, ary afaka anampiana azy ny sehatra fifampiresahana Dafina , misaritaka, feno saingy tsy mitovy. Afaka anampiana ny lisitra ihany koa ireo tranombakoka roa – ny an'ny jodaisma marokàna ao Casablanca , sy ny an'ny Ivontoeran'ny kolontsaina jiosy sy marokàna ao Bruxelles . Raha tsy hitanisa ireo tranonkala mifandray amin'izany – toy ilay iray natokana ho an'ny fanavaozana ny sinagôga Attias ao Essaouira.
Araka izany dia atolotr'ilay bilaogera ho antsika ny bilaogy iray vao avy nosokafana mihitsy, Jewish Morocco  (Ireo Jiosy ao Maraoka), soratan'ilay Amerikàna Chris Silver. Chris Silver, izay mitrandraka ireo toerana jiosy rehetra manerana ny firenena, dia manoratra momba ireo tanandehibe tsy mba voatanisa velively ao anatin'ny “blogoma” (tontolon'ny bilaogy maraokàna). Ao anaty lahatsoratra iray vao haingana, tantarainy ny fihaonany tamin'ireo Jiosy maraokàna tao Oujda  [angl] :
Google Earth sy Wikimapia  no lasa loharano tena mahaliana entina mamantatra ny tontolon'ny Jiosy ao Maraoka. Ireo fampiasa roa ireo dia ahafahan'ireo mpampiasa azy mamantatra ireo teboka mipetraka eo anaty sarintany iray, izy matetika mazava be. Araka izany, ohatra, ny fijerena avy eny an-danitra an'i Rabat dia hahitana an'i mellah sy sinagôga iray (“sinagôga jiosy ao atsimon'i mellah” anaty taratra misy faritra 3 voamarika) ankoatra ireo toerana marobe hafa. Ilay mpampiasa ihany no manoratra ny torohay, ary raha ny tokony ho izy, dia olona ety ambonin'ny tany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/08/22/149472/
 Manana tantara lavabe ifandraisany amin'ny Jodaisma i: http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_Juifs_au_Maroc
 André Azoulay: http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Azoulay
 Zara raha misy zavatra hita ety anaty aterineto momba ireo Jiosy Maraokàna: http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2009/04/15/un-blog-sur-le-maroc-juif/
 Visiting Jewish Morocco : http://rickgold.home.mindspring.com/
 jodaisma marokàna ao Casablanca: http://www.casajewishmuseum.com/index.php?page=musee
 Ivontoeran'ny kolontsaina jiosy sy marokàna ao Bruxelles: http://www.judaisme-marocain.org/
 toy ilay iray : http://synagogueattias.com/
 ny fihaonany tamin'ireo Jiosy maraokàna tao Oujda: http://jewishmorocco.blogspot.com/2009/04/dinner-in-oujda.html
 Manoratra izy : http://jewishmorocco.blogspot.com/2009/04/visiting-jewish-morocco-resources-on.html
 sinagôga iray : http://wikimapia.org/#lat=34.0245919&lon=-6.8299931&z=18&l=0&m=a&v=2